Psa 90 | Mal1865 | STEP | Fivavak'i Mosesy, lehilahin'Andriamanitra. Tompo ô, efa fonenanay hatramin'ny taranaka rehetra Hianao.
Ny fiankinan'ny olo-marina amin'Andriamanitra, na dia mandalo faingana aza ny androny sady isehoan'ny fahatezeran'Andriamanitra
1 Fivavak'i Mosesy, lehilahin'Andriamanitra. Tompo ô, efa fonenanay hatramin'ny taranaka rehetra Hianao.
2 Fony tsy mbola ary ny tendrombohitra, Na voaforonao ny tany sy izao rehetra izao, Dia Andriamanitra Hianao hatramin'ny taloha indrindra ka mandrakizay. 3 Mamerina ny olona ho amin'ny vovoka ▼
▼ Heb. fahatorotoroana
Hianao Ka manao hoe: Miverena, ry zanak'olombelona. 4 Fa eo imasonao ny arivo taona dia toy ny fandalon'ny omaly, Ary tahaka ny fotoam-piambenana iray amin'ny alina. 5 Manindao azy tahaka ny riaka Hianao torimaso izy; Amin'ny maraina tahaka ny ahitra mora miova izy. 6 Amin'ny maraina mamony izy, nefa mora miova ▼
▼ Na: Amin'ny maraina dia tahaka ny kolokolon'ahitra izy
; Amin'ny hariva voajinja izy ka maina.
7 Fa lanin'ny fahatezeranao izahay, Ary raiki-tahotra noho ny fahaviniranao. 8 Ny helokay efa nataonao teo anatrehanao, Ary ny fahotanay miafina teo amin'ny fahazavan'ny tavanao. 9 Fa ny androanay rehetra efa lasa amin'ny fahatezeranao; Efa laninay toy ny eritreritra ny taonanay. 10 Fito-polo taona no andron'ny taonanay Ary raha tàhiny mateza aza, dia valo-polo taona, Nefa fahasasarana sy zava-poana ny voninahiny, Fa mihelina faingana izany, ka lasa manidina izahay. 11 Iza no mahafantatra ny herin'ny fahatezeranao sy ny fahaviniranao Araka izay tokony ho fahatahorana Anao? 12 Mampianara anay hanisa ny andronay, Hahazoanay fo hendry.
13 Miverena, Jehovah ô! Mandra-pahoviana? Ary mba aneneno ny amin'ny mpanomponao. 14 Vokiso ny famindram-ponao nony maraina izahay, Mba hihobianay sy hifalianay amin'ny andro rehetra hiainanay. 15 Mampifalia anay araka ny andro nampahorianao anay Sy ny taona nahitanay loza. 16 Aoka hiseho amin'ny mpanomponao ny asanao, Ary ny voninahitrao amin'ny zanany. 17 Ary aoka ho aminay ny fahasoavan'ny Tompo Andriamanitray; Ary ampitoero aminay ny asan'ny tananay; Eny, ny asan'ny tananay, ampitoero izy.